Boqortooyada Midowday waxay ubaahantahay inay kordhiso Liiska Cagaaran si looga fogaado balaayiin dakhli dalxiis oo lumay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Boqortooyada Midowday waxay ubaahantahay inay kordhiso Liiska Cagaaran si looga fogaado balaayiin dakhli dalxiis oo lumay
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Dowladda Boqortooyada Midowday ayaa lagu wadaa inay dib u eegis ku sameyso liiska cagaaran kahor 7 Juun, ku dhowaad sanad kadib markii shuruudaha karantiil ee qasabka ah ay dhaqan galeen.
Ku dhawaaqiddu waxay imaaneysaa ka hor inta aan la bilaabin xarun casri ah oo loogu talagalay soo dejinta garoonka London Heathrow, taasoo abuureysa awood dheeri ah oo loogu talagalay dadka imanaya ee liistada cagaaran la ballaariyey.
Cilmi-baaris cusub oo CEBR ah ayaa muujisay in rakaabka ganacsiga iyo xilliyada firaaqada ah ee loo maro Heathrow oo keliya ay xisaabtamaan in ka badan 16 bilyan oo lagu qarash gareeyay UK oo dhan.
Safrayaasha Mareykanka waxay bixiyaan kobcinta ugu weyn, oo ah accounting 3.74bn, ama kudhowaad rubuc wadarta qarashka, taasoo muujineysa muhiimadda ay leedahay soo celinta jidadka muhiimka ah ee transatlantic.
Cilmi baaris ayaa shaaca ka qaaday abaalmarinta UK maadaama wadarta kharashka booqdayaashu ay kor u kici karaan in ka badan b 18bn sanadka 2025 hadii UK si buuxda dib ugu furanto xagaagan, taas oo ka faa'iideysaneysa ganacsiga guud ahaan dalka laga bilaabo London ilaa Dundee.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa qarka u saaran inay weydo balaayiin ginni oo ah kharashka rakaabka Heathrow haddii liiska cagaaran aan lagu darin iyadoo qeyb ka ah dib u eegista safarka Juun 7th. Cilmi-baaris cusub oo ka socota CEBR - oo ah koox hoggaamineysa saadaalinta dhaqaalaha - ayaa shaaca ka qaaday in ganacsiga iyo rakaabka firaaqada ah ee yimaada Heathrow oo keliya ay qarash gareeyaan billion 16 billion pounds dalka oo dhan. Kharajka rakaabkani waa mid muhiim u ah, kaliya maahan warshadaha duulimaadka laakiin waa inuu joogteeyaa shaqooyinka kumanaan ganacsato ah, laga bilaabo dukaamada ku yaal Bond Street iyo kuwa kale ee Dundee.
Soo-booqdayaasha Mareykanka ee socdaalka ku maraya Heathrow ayaa ah isha ugu weyn ee dakhliga dalxiiska soo gala ee dhaqaalaha oo dhan, iyadoo rakaabkan ay ku kacayaan 3.74 23 billion pounds, ku dhowaad rubuc (21%) wadarta qarashka inta ay booqanayaan Boqortooyada Ingiriiska. Faafa kahor, Mareykanka wuxuu ahaa suuqa ugu sareeya ee taraafikada rakaabka, iyadoo LHR - JFK uu yahay mid kamid ah marinada ugu macaashka badan aduunka iyo in kabadan 2019 milyan oo rakaab ah oo kasoo safraya garoonka diyaaradaha ilaa America sanadka 700. Tani waxay muujineysaa baahida deg degga ah ee loo qabo dib u soo celinta UK transatlantic waddooyinka - adoo ku daraya Mareykanka liiska cagaaran fursadda ugu horreysa. Booqdayaashani waxay taageeraan magaalooyin iyo magaalooyin kuyaala UK oo dhan, iyadoo wadarta qarashka ku baxa rakaabka Mareykanka ay ugu deeqayaan over XNUMXm dhaqaalaha Scottishka oo keliya, sida laga soo xigtay Booqashada Britain.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira khatar ah in booqdayaashan Mareykanka ay aadi karaan meelo kale. Talyaanigu wuxuu u furay albaabadiisa inuu si buuxda u tallaalo dadka safarka ah ee Mareykanka ah, Faransiiska wuxuu isku diyaarinayaa inuu ku daydo. Haddii waddamada Midowga Yurub ay sii wadaan inay si dhaqso leh oo wax ku ool ah u dhaqaaqaan si ay u soo celiyaan xiriirkooda Mareykanka, markaa Boqortooyada Midowday waxay ku dhammaan kartaa inay fursadahaas dhaqaale siiso Midowga Yurub, sida ay tahay in Dowladdu ay aasaaska u dhigto himilooyinkeeda Caalamiga ah ee Ingiriiska.
Tan iyo bilowgii dib u bilaabista safarka caalamiga ee May 17th, Horumar degdeg ah ayaa laga sameeyey soo saarista tallaalka adduunka, gaar ahaan Mareykanka halkaasoo heerka tallaalku uu si dhakhso leh u gaadhayo Ingiriiska. Horumarkan, oo ay weheliso tijaabinta iyo xakamaynta halista ku saleysan ee Dowladdu, waxay u oggolaaneysaa iskuxirayaasha in si ammaan ah loogu soo celiyo in badan oo ka mid ah la-hawlgalayaasha ganacsiga ee halista yar ee Boqortooyada Midowday, iyagoo sii deynaya waxtarka dhaqaale ee badan ee soo booqdayaashan, iyadoo la ilaalinayo guulaha laga gaaray dagaalka fayruuskan.
Cilmi-baarista CEBR ayaa sidoo kale tilmaamaysa in kharashka ku baxa rakaabka ku safraya Heathrow lagu wado inuu koro ilaa .18.1 18bn sanadkii bartamihii tobanka sano, haddii safarka diyaaradaha caalamiga uu dib u bilowdo xagaagan. Laakiin haddii xaaladuhu ka hortagaan taas oo lambarrada booqdayaashu si tartiib ah u koraan, kharashka ayaa dhici kara in ka badan 13.6% illaa £ 2025bn sannadka XNUMX.
Warkani wuxuu imanayaa iyadoo Heathrow ay kala shaqeyneyso Dowladda sidii loo soo saari lahaa xarun cusub oo casri ah oo ay ku imaan doonaan dadka imanaya, iyadoo loo abuurayo awood badan dadka soo galaya liiska cagaaran ee la ballaariyay. Marka ugu horeysa, xarunta loo qoondeeyay waxay ku jirtaa Terminal 3 waxayna bilaabmi doontaa Juun 1st, ka hor intaan loo wareejin Terminal 4.
Maamulaha Heathrow, John Holland-Kaye, ayaa yiri: “Cilmi baaristani waxay muujineysaa inta ganacsi ee ka jira guud ahaan Boqortooyada Midowday inay khasaarayso sababtoo ah xayiraadaha dowladda ee ku aadan soo booqashada shisheeyaha iyo suuqyada. Dawladdu waxay leedahay qalab ay ku ilaaliso caafimaadka bulshada iyo dhaqaalaha labadaba waana in Wasiiradu furtaan meelaha halista badan ee ku baahsan Yurub, iyo sidoo kale Mareykanka, iyadoo qayb ka ah dib u eegista soo socota ee Juun 7.th. "
Jace Tyrrell, Madaxa Fulinta ee Shirkadda New West End ee London, ayaa yiri: Wadooyinka London sida caadiga ah waxaa mashquul ku ah dalxiisayaasha xilligan oo kale maadaama ay u duulaan kaliya maaha inay soo booqdaan astaamaha caanka ku ah adduunka, laakiin inay lacag ku qaataan dukaamadayada, tiyaatarada, hudheelada iyo maqaayadaha. Qaar badan oo ka mid ah ganacsiyadaan ayaa si weyn u lumiyay shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay, iyagoo saameyn ku yeeshay habnololeedyada guud ahaan caasimadda, sidaas darteed soo laabashada booqdayaasha xagaagan ee dibedda ka yimid ayaa si weyn loo soo dhaweynayaa. Waxaan dowladda ka codsaneynaa inay sameyso wax walba oo ay awood u siin karto inay ku soo laabtaan iyagoo nabad qaba. ”
Andrew McKenzie Smith, Aasaasihii Lindores Abbey Distillery ee Newburgh, Fife, ayaa yiri: “Distilleries ee Scotland ayaa caan ka ah adduunka oo dhan. Waa sababta dalxiisayaasha - gaar ahaan Mareykanka - ay had iyo goor u soo duulaan raxan raxan si ay u arkaan farsamayaqaannadeena iyo haweenkeena oo ficil ah, iyagoo wata malaayiin rodol oo la socda taas oo ka caawinaysa taageerida shaqaalaha maxalliga ah, ganacsiyada iyo bulshada. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo safrin dibedda, ilaha dakhli ee muhiimka ah ayaa lumay sanadkii la soo dhaafay si ay u waxyeeleeyaan isla dadkan isla. Kaliya maahan garoomada diyaaradaha iyo diyaaradaha inay ku xisaabtamaan dib u bilaabashadooda. Waa kuwa jahwareeriya dhamaan Fife iyo guud ahaan Scotland sida anaga oo kale. ”